Deeqbixiyeyaasha oo ku baaqay midnimo ay Soomaalidu kula tacaalaan COVID-19
Qoraal ay soo saareen saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya ayay ku sheegeen in ay ku bogaadinayaan dowladda Soomaaliya dedaallada ay ku dooneyso iney ku xakameyso in cudurka COVID-19 uu ku baaho dalka.
“Waxaan ognahay in faafista viruska corona uu yahay caqabad caalami ah, waana mid ay tahay inaan dhammaanteen si wadajir ah u waajahno. Jawaabtaasi waa mid u baahan midnimo iyo in colaadda iyo rabshadaha aan meel iska dhigno,” ayaa lagu yiri qoraalka beesha caalamku ay soo saareen.
Waxaa ay intaa ku dareen in ay ayyidsan yihiin baaqii ka soo baxay xogahayaha uud ee QM ee dalbanayay xabad joojin dunida oo dhan ah. Waxa ay qoraalkooda ku sheegeen in looga baahan yahay dhammaan kooxaha ku lug leh colaadda Soomaaliya in ay joojiyaan rabshadaha.
“Waxaan ugu baaqeynaa Al-Shabaab iyo kooxaha kale iney joojiyaan rabshadaha, iyo ficillada argagixinimo si loo suurtogeliyo in gargaarku uu gaaro kuwa u baahan,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Dhanka kale, beesha caalamka ayaa ku baaqday in dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay u midoobaan sidii looga hortagi lahaa faafitaanka coronavirus ee Soomaaliya. Waxaa ay soo jeediyeen in lagu dhammeeyo khilaafaadka jira qaab midnimo ah islamarkaana ay haddii laga fursan waayo in kulamada dowladda, kuwa maamulada gobollada iyo shirarka baarlamaankaba ay noqdaan kuwa qaab digital ah loo qabto.
Ugu danbeyntii, saaxiibada Soomaaliya ayaa qoraalkooda ku sheegay in xilligan adag ee cudurka coronavirus uu bulshada caalamka culeesyo badan ku keenay ay tahay in mas’uuliyiinta Soomaalida iyo milkiilayaasha dhulka ay barakaceyaashu deggan yihiin ay gabi ahaanba joojiyaan in dadkaasi laga saaro xeryaha ay deggan tihiin mudada lagu jiro dagaalka ka dhan ah faafitaanka cudurka COVID-19.